Uchenjeri hwechokwadi hunoshevedzera (1-12)
“Ndichaita kuti mazuva ako ave mazhinji” (11)
Mukadzi benzi anoshevedzera kuvarume (13-18)
“Mvura yekuba inotapira” (17)
9 Uchenjeri hwechokwadi hwakavaka imba yahwo;Hwakaveza mbiru dzahwo nomwe. 2 Hwakapedza kuvhiya nyama yahwo;Hwakasanganisa waini yahwo;Hwakaisawo zvekudya patafura yahwo. 3 Hwakatuma vashandikadzi vahwoKuti vashevedzere vari panzvimbo dzakakwirira muguta vachiti:+ 4 “Munhu wese asina ruzivo, ngaauye kuno.” Hunoti kumunhu asina pfungwa:* 5 “Uya udye zvekudya zvanguNekunwa waini yandasanganisa. 6 Siya kusava neruzivo kwako* urarame;+Famba wakananga mberi munzira yekunzwisisa.”+ 7 Munhu anoruramisa museki anozviunzira ruzvidzo,+Uye wese anotsiura munhu akaipa acharwadziswa. 8 Usatsiura museki, nekuti achakuvenga.+ Tsiura munhu akachenjera, uye achakuda.+ 9 Ipa ruzivo kumunhu akachenjera, uye achawedzera kuchenjera.+ Dzidzisa munhu akarurama, uye achawedzera kudzidza. 10 Kutya Jehovha ndiko kutanga kweuchenjeri,+Uye kuziva Mutsvenetsvene+ ndiko kunzwisisa. 11 Nekuti ini ndichaita kuti mazuva ako ave mazhinji,+Uye uchawedzerwa makore kuupenyu hwako. 12 Kana ukava akachenjera, kuchenjera kwako kuchabatsira iwe pachako,Asi kana uchituka, zvichakuwana iwe wacho. 13 Mukadzi benzi anotaura nenzwi riri pamusoro.+ Haana pfungwa uye haana kana chaanoziva. 14 Anogara pachigaro, pasuo remba yakeMunzvimbo dzakakwirira dzeguta,+ 15 Achishevedzera kuvanhu vari kupfuura,Vaya vari kufamba zvavo nenzira, achiti: 16 “Munhu wese asina ruzivo ngaauye kuno.” Anotaura kuvaya vasina pfungwa* achiti:+ 17 “Mvura yekuba inotapira,Uye zvekudya zvinodyirwa pakahwanda zvinonaka.”+ 18 Asi havazivi kuti imba yake ndeyevashakabvu,Kuti vaenzi vake vari muGuva* rakadzika.+
^ Kana kuti “njere.”
^ Kana kuti “Siyana nevasina ruzivo.”